အစိမ်းရောင်မြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့ နန်းဆန်စွာလှပနေပြီး ပုရိသတို့ရဲ့ အသည်းကျော်ဝိုင်းလေး - Cele Platform
အစိမ်းရောင်မြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့ နန်းဆန်စွာလှပနေပြီး ပုရိသတို့ရဲ့ အသည်းကျော်ဝိုင်းလေး
ပရိသတ်ကြီးရေ…. တေးသီချင်းများစွာ သီဆိုခဲ့ပြီး လူငယ်ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းနှလုံးထဲမှာ စွဲထင်ကျန်ရစ်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဝိုင်းလေးကို အားလုံးပဲသိကြမယ်ထင်ပါတယ်..။
သူမဟာဆိုရင် ကိုးရီးယားမင်းသမီးတစ်ယောက်လိုချစ်ဖို့ကောင်းတာဖြစ်ပြီး ပုရိသတိုင်းရဲ့ အသည်းစွဲ မော်ဒယ်လ်၊ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်လို့လည်းဆိုရမှာပါ….။ ဝိုင်းလေးရဲ့ “လွတ်လပ်ရေး” သီချင်းဗီဒီယိုဟာဆိုရင်လည်း ကြည့်ရှုသာအမြောက်အများရရှိခဲ့တာပါနော်…။
ဝိုင်းလေးရဲ့ လတ်တလောအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေဟာဆိုရင်တော့ photo shooting၊ ကြော်ငြာမဂ္ဂဇင်းတွေကို လက်ခံရိုက်ကူးလျက်ရှိပြီး အသစ်သစ်သော သီချင်းဗီဒီယိုတွေကိုလည်း ကြိုးစားပြင်ဆင်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်…။
ဝိုင်းလေးက ခရီးသွား ဝါသနာပါသူဖြစ်ပြီး၊ ခရီးသွားမှတ်တမ်းပုံရိပ်တွေကိုလည်း မကြာခဏဆိုသလို တင်လေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်..။ ဝိုင်းလေးဟာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ဘဝကြီးကို အေးချမ်းစွာ ဖြတ်သန်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်…။
ဝိုင်းလေးကပရိသတ်ကြီးနဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်ရအောင် လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွေဖြစ်ကြတဲ့ facebook၊ Instagramတို့တွင်သူမရဲ့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှု အနုပညာလှုပ်ရှားမှု အမျိုးမျိုးကိုအစဉ်အမြဲဖော်ပြပေးလေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်…။
အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်လည်း “အသက်ကြီးလာလေ ပိုလှလာလေ ပိုယုံကြညိမှုရှိလာလေ ပိုအောင်မြင်မှုရလာလေ ဖြစ်ချင်ပါတယ်နော်…” ဆိုတဲ့ သူမရဲ့ ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားထားတာပါနော်…။ မွေးနေ့ရောက်ဖို့လည်း ၂ရက်လိုတဲ့ သူမကို မွေးနေ့အကြိုဆုတောင်းလေးလည်း ပြောပေးသွားကြပါဦး…။ Source Wyne Lay ; Photo Credit Hein Latt ; Credit
ပရိသတျကွီးရေ…. တေးသီခငျြးမြားစှာ သီဆိုခဲ့ပွီး လူငယျပရိသတျတှရေဲ့ အသညျးနှလုံးထဲမှာ စှဲထငျကနျြရဈအောငျ လုပျနိုငျခဲ့တဲ့ ဝိုငျးလေးကို အားလုံးပဲသိကွမယျထငျပါတယျ..။
သူမဟာဆိုရငျ ကိုးရီးယားမငျးသမီးတဈယောကျလိုခဈြဖို့ကောငျးတာဖွဈပွီး ပုရိသတိုငျးရဲ့ အသညျးစှဲ မျောဒယျလျ၊ သရုပျဆောငျတဈယောကျလို့လညျးဆိုရမှာပါ….။ ဝိုငျးလေးရဲ့ “လှတျလပျရေး” သီခငျြးဗီဒီယိုဟာဆိုရငျလညျး ကွညျ့ရှုသာအမွောကျအမြားရရှိခဲ့တာပါနျော…။
ဝိုငျးလေးရဲ့ လတျတလောအနုပညာလှုပျရှားမှုတှဟောဆိုရငျတော့ photo shooting၊ ကွျောငွာမဂ်ဂဇငျးတှကေို လကျခံရိုကျကူးလကျြရှိပွီး အသဈသဈသော သီခငျြးဗီဒီယိုတှကေိုလညျး ကွိုးစားပွငျဆငျလကျြရှိတာဖွဈပါတယျ…။
ဝိုငျးလေးက ခရီးသှား ဝါသနာပါသူဖွဈပွီး၊ ခရီးသှားမှတျတမျးပုံရိပျတှကေိုလညျး မကွာခဏဆိုသလို တငျလရှေိ့တာဖွဈပါတယျ..။ ဝိုငျးလေးဟာ သူငယျခငျြးတှနေဲ့အတူ ဘဝကွီးကို အေးခမျြးစှာ ဖွတျသနျးနတောလညျးဖွဈပါတယျ…။
ဝိုငျးလေးကပရိသတျကွီးနဲ့ အဆကျအသှယျမပွတျရအောငျ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာတှဖွေဈကွတဲ့ facebook၊ Instagramတို့တှငျသူမရဲ့ နစေ့ဉျလှုပျရှားမှု အနုပညာလှုပျရှားမှု အမြိုးမြိုးကိုအစဉျအမွဲဖျောပွပေးလရှေိ့တာဖွဈပါတယျ…။
အခုတဈခါမှာဆိုရငျလညျး “အသကျကွီးလာလေ ပိုလှလာလေ ပိုယုံကွညိမှုရှိလာလေ ပိုအောငျမွငျမှုရလာလေ ဖွဈခငျြပါတယျနျော…” ဆိုတဲ့ သူမရဲ့ ဆန်ဒကိုထုတျဖျောပွောကွားထားတာပါနျော…။ မှေးနရေ့ောကျဖို့လညျး ၂ရကျလိုတဲ့ သူမကို မှေးနအေ့ကွိုဆုတောငျးလေးလညျး ပွောပေးသှားကွပါဦး…။ Source Wyne Lay ; Photo Credit Hein Latt ; Credit
မွေးနေ့မှာ စုဆောင်းထားတဲ့အနုပညာကြေး သိန်း ( ၁၀၀ )နဲ့ မိဘနှစ်ပါးကို ကန်တော့ခဲ့တဲ့ နေဆန်
“လှပတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့” ဆိုပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံလေးတွေတင်လိုက်တဲ့ ပိုးကြာဖြူခင်